Cajiib waxaad Maqli Jirtay Xayawaan Aya dabar Go,aya Ka Waran Qoomiyad Jinsigoodu Dabar Go,ayo | Biyoguurenews.com
Home Faallooyin Cajiib waxaad Maqli Jirtay Xayawaan Aya dabar Go,aya Ka Waran Qoomiyad...
Cajiib waxaad Maqli Jirtay Xayawaan Aya dabar Go,aya Ka Waran Qoomiyad Jinsigoodu Dabar Go,ayo
Muwaadin u dhashay dalka Maraykanka ayaa waxaa dilay dad looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin qabiil laga cabsi qabo in uu dabar go’o oo ku nool jasiirada Nicobar ee dalka Hindiya
”Booliska ayaa sheegay in Mr Chau uu horay u booqday jasiirada waqooyiga Sentinel ku dhawaad afar ilaa shan jeer, waxaana halkaasi geeyay kalluumeysatada deegaanka” Subir Bhowmik ayaa sidaasi u sheegay BBC-da.
”Tiro ahaan dadka ka soo jeeda qowmiyaddan Sentinel waa kuwo aad u yar, xitaa ma fahamsana qaabka loo isticmaalo lacagaha. Waxaa sharcidarro ah xitaa in wax xiriir ah lala sameeyo.”
”Waxaa lagu weeraray falaaro balse socodkiisa ayuu sii watay, kalluumeysatadana waxay arkeen dadka qabaailkan ka soo jeeda oo xarig qoorta uga xiraya, waxayna dhulka ku jiideen meydkiisa. Cabsi daraadeed ayayna lasoo carareen’,’ warbixinta ayaa intaasi ku dartay.
”Waa kiis aad ugu adag booliska” ayuu yiri Mr Bhowmik. “Xitaa xabsi uma taxaabi kartid dadka kasoo jeeda qowmiyadan sentinel”.
Hay’addo badan oo caalami ah, sida hay’adda fadhigeedu yahay London ee Survival International ayaa u ololeynayay sidii loo badbaadin lahaa qabaa’ilo kala duwan oo jasiiradaha ku noolaa in ka badan 60 kun oo sano.
Labada qabiil ee looga cabsi qabo inay dabar go’aan ee ku nool jasiiradaha sida qabaa’ilka Jarawa iyo Sentinel oo ah dad noloshooda ay ku xiran tahay ugaarsiga duurjoogta iyo miraha dhirta, ayaa haddii ay wax xiriir ah la sameeyaan dadka dunida ku nool waxay ka cabsi qabaan in cudurro ay ku dhacaan.
Qabaailka sentinel ayaa ah dad aad u nugul, go’doonka ay ku jiraanna wuxuu ka dhigay kuwo aan adkaysi u lahayn cudurrada qaar sida hargabka iyo jadeecada.
Previous articleDAAWO, Gaadiidka Ethopianka ee Dekada Berbera ka qaada rarka oo ka cabanaya hay,ada WFP oo raashinkii aay saari Lahayd
Next articleDAAWO, Awal handaraab Kaliya ayay ahayd ee Iminka Waxaan Kusii Dhuftay mid sagaal Jeer Laban Laaba oo sacad ayaa